Ahoana ny fiterahan'ny amphibiana, ny toetrany ary ny toetrany. ? | Ny trondro
Carlos Garrido | | biby miain-droa
biby miain-droa biby vertebrate izy ireo Mampiavaka azy ireo ny hodiny mitanjaka, tsy misy mizana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny tsiambaratelo rehetra momba ireo biby ireo isika, manomboka amin'ny fananganana amphibians, ireo karazana amphibiana misy, ohatra vitsivitsy ary fahalianana hafa izay azo antoka fa tena ilaina aminao.
1 Famokarana amphibians
2 Biby amphibiana, inona ireo?
3 Karazana amphibians
4 Toetra amphibiana
5 Ohatra amin'ny amphibians
5.3 Kobaka mahazatra (Bufo bufo)
5.4 Sahona Vermilion (Rana temporaria)
Maha oviparous, fananganana amphibians ho an'ny atody. Ny réptile sy ny biby mampinono dia miteraka amin'ny fampiraisana ao anaty (ao anatin'ny vehivavy) raha manao fanazaran-tena ny amphibians zezika ivelany.
La ny zezika amphibia dia miseho amin'ny rano madio, satria io karazan-drano io dia ho ilay miaro ny atody mandritra ny fivoarany ary mamela ny amphibians tsy mila fametahana embryonika, toy ny sac amniotic na allantois, noho izany ny sasany amin'ireo toetra tsy mitovy amin'ny amphibiana vertebrate terrestrial hafa.
Ny zezika ho an'ny ivelany dia manaraka ny fizotrany mampiavaka azy: ny lahy mitazona ny vavy, izay manatody. Rehefa mivoaka ireo dia mandeha ny lahy mandraraka ny tsirinain'izy ireo amin'izy ireo ary manome zezika azy ireo. Ny atody dia mijanona ao anaty rano mamorona tady na miraikitra amin'ny zavamaniry anaty rano. Mipoitra avy amin'izy ireo indray ny olitra anaty rano.
Na amin'ny trondro na amphibians, izay manjaka ny zezika ivelany, ny atody misy fonony manify, satria ny spermatozoa dia tsy maintsy miampita azy mba hisian'ny fampiraisana. Noho io antony io, ireo atody ireo dia tsy maintsy atsofoka ao anaty rano mifatotra, mamorona clusters be voluminous.
Amphibians dia teraka ho a olitra anaty rano mihetsika miaraka amin'ny rambony ary miaina amin'ny alàlan'ny rivotra. Rehefa mitombo ampy ny olitra, antsoina hoe tadpole, dia mandalo fizotran'ny metamorphosis tanteraka. Afa-tsy ireo karazana sahona vitsivitsy amin'ny ala mando, dia hanjavona ireo endri-javatra ireo amin'ny farany ary hosoloana havokavoka sy tongotra rehefa mihalehibe ireo tadiny.
Ity sokajy amphibians vertebrate ity dia misy sahona, saobakaka, salamanders ary caecilians anaty rano. Ireo amphibianina ireo dia manana fahaizana miaina na miditra na ivelan'ny rano, na dia mila mando foana aza izy ireo satria io no fofon'aina entin'izy ireo.
Biby amphibiana, inona ireo?
Amin'ny teny latina ny teny hoe amphibian dia manana heviny miavaka, miresaka ara-bakiteny ny "fiainana roa". Ary ity dia mampiavaka manokana ireo biby ireo, afaka mampifanaraka sy manatanteraka ny asany biolojika ao ekosistema roa samihafa: velaran-tany sy velaran-drano. Na izany aza, handinika kely kokoa ny hevitry ny amphibian isika.
Amphibians dia ao amin'ilay fianakavian'ny zavamananaina lehibe voasokajy ho vertebrata (manana taolana izy ireo, izany hoe taolana anatiny) anamniotes (Ny embryoninao dia lasa valopy efatra samihafa: ny chorion, ny allantois, ny amnion, ary ny sac yolk, mamorona tontolo feno rano ahafahany miaina sy manome sakafo), tetrapods (manana rantsam-batana efatra izy ireo, miasa na manipulative) ary ectothermic (Manana hafanan'ny vatana miovaova izy ireo).
Manana fe-potoana antsoina hoe izy ireo fiofony (fanovana ataon'ny biby sasany mandritra ny dingan'ny fampandrosoana biolojika ary misy fiantraikany amin'ny morphologie sy ny asany ary ny fomba fiainany). Anisan'ireo fanovana malaza indrindra niainana ny fiakarana avy amin'ny angidina (vaovao) ka hatramin'ny havokavoka (olon-dehibe).
Ao anatin'ity fianakaviana lehibe amfibiana ity dia afaka manao fanasokajiana kely miorina amin'ny baiko telo isika: anurans, caudates o urodeles y apodal o gymnophiona.
ny anurans Izy ireo dia karazana amphibians izay atambatra miaraka amin'ireo amphibians rehetra fantatsika fa sahona sy saobakaka. Tandremo fa ny sahona sy ny saobak dia tsy mitovy karazana. Izy ireo dia miaraka miaraka amin'ny fitoviana sy ny fitondran-tenany.
ny urodeles Izy ireo dia karazana amphibians hafa samy hafa amin'ny fananana rambony lava sy vatan-kazo lava. Ny mason'izy ireo dia tsy mivoatra be ary rakotry ny hoditra manify. Eto no ahitantsika ireo vaovao, salamanders, proteos ary mermaids.
Farany, misy ny karazana amphibians apodal, izay mampiavaka indrindra azy rehetra noho ny fisehoany. Izy ireo dia mitovy amin'ny kankana na kankana amin'ny tany satria tsy manana rantsam-batana ary lava ny vatan'izy ireo.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, ny amphibians dia biby vertebrate, ary manana ny "tombony" izy ireo primitive kokoa amin'ireo kilasy biby monina ny planeta Tany. Voalaza fa manodidina ny 300 tapitrisa taona teo ho eo izy ireo, saika tsy nisy!
Manana rantsam-batana efatra izy ireo: ny roa eo aloha ary ny roa aoriany. Ireo rantsambatana ireo dia fantatra amin'ny anarana manaitra an'i Ry. Ny quiridus dia miavaka amin'ny fananana morphology mitovy amin'ny tanan'olombelona, ​​miaraka amin'ny rantsan-tànana efatra amin'ny tongotra eo anoloana ary ny dimy ao aoriana. Ny amphibianina maro hafa koa dia manana rantsambatana toa rambo fahadimy.
Maha-zavamananaina an'ny ra mangatsiaka, ny hafanan'ny vatany dia miankina, ary betsaka amin'ny tontolo iainany, satria tsy afaka mifehy ny hafanany anatiny. Izany no iray amin'ireo antony mahatonga ny force majeure izay nahatonga azy ireo hizatra amin'ny fiainana anaty rano sy an-tanety. Ireo rafitra roa ireo dia manampy anao hisorohana ny hafanana be loatra na ny fampangatsiahana ny vatanao.
Zanaka oviparousrehefa mivoaka avy amin'ny atody. Ny vavy dia miandraikitra ny fametrahana ireo atody ireo ary manao izany foana izy ao anaty tontolo anaty rano, noho izany ireo tanora santionany dia manana rafi-pisefoana misy mizana.
Ny hoditr'ireo zavamiaina ireo dia mahazaka, mahavita mamakivaky molekiola, etona ary poti hafa. Ny karazana sasany dia mahavita manafina zavatra misy poizina amin'ny hodiny ho rafitra miaro amin'ny loza ivelany.
Na mifantoka amin'ny hoditrao aza dia tokony homarihina fa izany no izy mando ary miaina miaraka amin'ny mizana, tsy toy ny karazana biby hafa izay mitondra azy ireo. Io toe-javatra io dia ahafahan'izy ireo mandray tsara rano ary, vokatr'izany, ny oxygen. Mifanohitra amin'izany aza, mahatonga azy ireo ho mora tohina amin'ny fizotran'ny fahampian-drano. Raha amphibiana iray dia ao amin'ny tontolo iainana ambany ny hamandoana, dia ho maina vetivety ny hodiny, izay mety hiteraka olana lehibe ary mety ho faty mihitsy aza.
Ireo biby ireo dia manana rafi-pandehanana izay ny ampahany lehibe dia a fo tricameral ahitana atria roa sy ventricle. Mihidy ny fivezivezeny, avo roa heny ary tsy feno.
Matetika ny maso dia be volo ary, mibontsina, izay manamora ny a sehatra fijery lehibe tena mety rehefa mihaza haza mety ho remby. Misy maningana toa ny vaovao.
Na dia mety tsy ho toa azy aza izany, ny amphibians manana nify tokoa izy ireo, na dia tsy fahita firy aza ireo. Ny asany dia ny manampy amin'ny fitazomana ny sakafo. Ny lela koa dia lasa fitaovana tonga lafatra hisamborana biby kely hafa. Manolotra a vavony miendrika tubular, misy tsinay kely fohy, voa roa, ary tatavia urinary.
Ohatra amin'ny amphibians
Amin'izao fotoana izao dia misy katalaogy manodidina ny sasany Karazana amphibiana 3.500 XNUMX. Na izany aza, ny mpahay siansa, amin'ny vinavinan'izy ireo, dia maminavina fa mety ho manodidina ny 6.400.
Rehefa mieritreritra amphibians isika dia miseho foana ao an-dohantsika ny sarin'ny sahona na saobakaka, fa manana biby hafa koa isika toa ny newts sy salamanders.
Ireto misy ohatra vitsivitsy fotsiny amin'ny amphibians, na dia, mazava ho azy, mbola misy maro hafa:
Ity karazana salamander ity dia fantatra koa amin'ny hoe axolotl na purepecha achoque. Izy io dia karazana endemika, izany hoe amin'ny toerana iray ihany no misy izy. Amin'ity tranga ity dia monina ao amin'ny Lagoon Zacapu, any amin'ny fanjakan'i Michoacán (Mexico) izy.
Izy io dia miavaka indrindra amin'ny fananana vatana somary matevina, rambo fohy ary gill. Ny lokony na mena io, ampidirina amin'ireo teboka mainty mivelatra manerana ny vatany iray manontolo, ka mahatonga azy tsy ho voamariky ny olona.
Any amin'ny faritanin'i Eoropa no misy ity biby ity, indrindra any avaratry Espana sy any atsinanan'i Frantsa. Izy io dia manana loko maitso miaraka amina tonony maintso manaitra. Ho fanampin'izany, ny lamosiny dia niampita tsipika mena mitsivalana tena mena.
Kobaka mahazatra (Bufo bufo)
Fahita tokoa ny mahita azy io saika manerana ny kaontinanta eran'i Eropa sy ny faritra Azia. Aleo ny toeram-ponenana vita amin'ny rano mihandrona, faritra misy rano manondraka sns. Angamba, ny fanoherana fatratra ny toe-piainana any amin'ny rano tsy madio dia nahatonga azy io ho iray amin'ireo amphibia malaza indrindra. Tsy manana loko mamirapiratra izy io, fa ny volony kosa dia manana endrika "volontsôkôlà", rakotry ny bontsibontsina maro amin'ny endrika zana-kazo.
Sahona Vermilion (Rana temporaria)
Tahaka ireo havany voatonona etsy ambony, ity amphibiana ity dia nahatonga an'i Eropa sy Azia honenany koa. Na dia aleony aza ny toerana mando, ity sahona ity dia mandany ny fotoanany betsaka amin'ny rano. Tsy an'ny lamin'ny loko raikitra izy io, fa ny tsirairay kosa dia afaka mampiseho loko isan-karazany. Na eo aza izany, ny hoditra volontsôkôlà misy tasy kely dia mazàna manjaka. Ny tsoka maranitra dia iray amin'ireo mampiavaka azy.
Amphibians misy poizina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » ny hafa » biby miain-droa » biby miain-droa